पैसाको लागि फिल्म खेलेको आरोपमा आक्रोशित अनमोल (भिडियो) » खबरहरुको एउटै केन्द्र
बुधबार, जेष्ठ १६, २०७५ १२:१५ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पछिल्लो समय सर्वाधिक रुचाइएका नायक हुन् अनमोल केसी। उनलाई लिएर फिल्म बनाउनको लागि नेपाली फिल्मका निर्माता तँछाडमँछाड गरिरहेका छन्। उनलाई महँगो पारिश्रमिकमा फिल्म खेलाउनको लागि निर्माताहरू लागि परेको देखिन्छ।
यसो भनिरहदा नायक अनमोल केसीले ब्याक टू ब्याक फिल्म साइन गरेको आरोप पनि उनलाई लाग्न लागेको छ किनभने उनले ‘ए मेरो हजुर-३’ साइन गरेका छन् र निर्देशक मिलन चाम्सले निर्देशन गर्न नयाँ चलचित्र पनि साइन गरेका छन्। निकै महँगो पारिश्रमिकमा उनले चलचित्र साइन गर्दा उनलाई पैसाको लागि चलचित्र खेल्न लागेको आरोप लागेको छ। उनले उक्त आरोपको खण्डन गरेका छन्।
एक अनलाइनसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन् -‘ब्याक टू ब्याक चलचित्र साइन गर्नुको अर्थ एकैसाथ दुबै चलचित्र रिलिज हुन्छन् भन्ने होइन । यो मेरो चलचित्रको पाइपलाइन हो । जुन, केही ग्यापमा रिलिज हुन्छ । कुनै पनि कलाकारले राम्रो कथा आयो भने छोड्नुहुदैन भन्ने मलाई लाग्छ । मैले यसअगाडि राम्रो कथा पाएको थिइनँ । यसैले धेरै चलचित्र गरिनँ । तर, यसपटक दुबै चलचित्रको कथा उत्कृष्ट लागेकाले साइन गरेको हुँ ।’ हेर्नुस् भिडियो।
PREVIOUS POST Previous post: तपाईंको स्थानीय सरकारमा कति बजेट आयो ? (सूची सहित)
NEXT POST Next post: On dead in road accident
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, जेष्ठ १६, २०७५ १२:१५
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, जेष्ठ १६, २०७५ १२:१५
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, जेष्ठ १६, २०७५ १२:१५
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, जेष्ठ १६, २०७५ १२:१५
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, जेष्ठ १६, २०७५ १२:१५